Telerehabilitation ho an'ny aretim-pitenenana ho an'ny olon-dehibe - Fiofanana kognitive
Telerehabilitation ho an'ny aretim-pitenenana ho an'ny olon-dehibe
Ianao izao: Home » Articles » Telerehabilitation ho an'ny aretim-pitenenana ho an'ny olon-dehibe
Ny pathologies pathologies dia sehatra iray iasan'ny mpitsabo miteny matetika. Ny fampiharana ny haitao (miha-mihabe) ny teknolojia hanitarana ny serivisy fanarenana any ivelan'ny toeram-pitsaboana - mampifandray ny matihanina amin'ny marary na ireo matihanina samihafa hitarika fanombanana sy fitsaboana - dia antsoina hoe Tele.
Telerehabilitation dia faritra iray amin'ny telemedicine izay ampiasain'ny departemanta ara-pahasalamana any Etazonia mba hampitohy ny elanelana misy eo amin'ny toeram-pitsaboana isan-karazany ataon'ny olon-dehibe. Ny departemantan'ny fahasalamana any Etazonia dia nampiasa tsara ny serivisy telemedicine hampiroborobo ny fahasalamana amin'ny alàlan'ny fampidirana ireo mpitsabo manokana sy ny toe-javatra samihafa amin'ny karazana fikirakirana hahatratrarana ny valin'ny marary mety indrindra.
Misy endrika telerehabilitation maro samihafa ampiasaina ary ao anatin'izany ny fanaraha-maso marary sy fampiraisana, fanaraha-maso ny marary lavitra ary ny fampiasana fampiharana hampandroso ny fahasalamana.
Betsaka ny literatiora azo ampiasaina hanohanana ny fampiasana telerehabilitation amin'ny fikarakarana ny marary efa lehibe; Cochrane tamin'ny 2013 dia ohatra vitsivitsy izay mitatitra ny fahombiazan'ny telerehabilitation amin'ny olona voan'ny lalan-dra, ary ny famoahana an'i Molini sy ny mpiara-miasa amin'ny 2015 izay nanadihady ny fampiharana ny serivisy telemedicine amin'ny fifandraisana sy aretina mitelina manasongadina vokatra tsara, ohatra ny tahan'ny tombam-bidin'ny famerenana amin'ny laoniny sy ny fampitomboana ny fampiharana miaraka amin'ny fahafaham-pon'ny marary.
Mba hanitarana ny vaovao misy, Kristen sy Joneen notontosaina tamin'ny taona 2019 (ary navoaka tamin'ny taona 2020) famerenana rafitra ny literatiora siantifika momba ny fanarenana amin'ny tele ireo serivisy mifandraika amin'ny fitenenana miteny.
Questa famerenana mikasika ny fikarohana novokarina tamin'ny 2014 ka hatramin'ny 2019 momba ny olon-dehibe manana aphasia mitaiza, aretina mifandraika amin'ny Parkinson, disphagia ary aphasia voalohany mandroso. Fianarana 31 no voafantina miaraka amin'ireto tanjona manaraka ireto:
Diniho ny fampiharana sy ny fahombiazan'ny telerehabilitation an'ny olon-dehibe ao anaty serivisy ho an'ny olon-dehibe manana fahasembanana miteny.
Tombano amin'ny antsipiriany ireo fitsaboana voara-maso lavitra mba hahazoana fampahalalana momba ireo matihanina voakasik'izany, ireo fitaovana sy ny toerana ampiasaina (ohatra, ao an-trano na eo anelanelan'ny klinika isan-karazany).
Tamin'ny fikarohana nodinihina dia nifandray tamin'ny marary tamin'ny alàlan'ny videoconferencing mampiasa rindrambaiko ara-barotra (Skype, Zoom, sns.) Sy ireo rindrambaiko fikarohana namboarina ireo mpitsabo kabary, ary ny solosaina sy ny takelaka ary ny rafitra teleconferencing feno kosa.
Ny valin'ity fanadihadihana voarindra ity dia manohy manohana ny fototr'ity lahatsoratra ity, dia ny maha-mety ny telerehabilitation hitsaboana ny aretin-kabary amin'ny marary olon-dehibe. Ny mpanoratra dia mahita porofon'ny fahombiazany sy ny fampiharana ny fampiharana amin'ny laoniny tele-rehabilitation, indrindra amin'ny maody sy videoconferencing; ny serivisy ampiharina lavitra any an-tranon'ireo marary dia nampiseho valiny tsara angamba noho ny fampiharana tao anaty tontolon'ny fifandraisana voajanahary kokoa noho ny amin'ny toeram-pitsaboana.
Ho famaranana, ilay nofaritana dia namboarina toy ny sehatra mivoatra sy mivoatra ho an'ny fitsaboana kabary, saingy mbola ilaina ny tetik'asa fikarohana matanjaka, ao anatin'izany ny fampiasana ny andrana fanandramana hifehezana ny fiovaovana marobe, hamaritana mazava tsara ny fahombiazan'ny serivisy fanamafisam-peo. Ho fanampin'izany, ny fikarohana amin'ny ho avy dia afaka manazava ny anjara andraikitra sy ny fiantraikan'ny fikarakarana ara-pahasalamana lavitra, manampy azy ireo hanome fanampiana ara-teknika na ara-teknika tsara kokoa ho an'ireo marary ao anatin'ny serivisy fanarenana kabary.
Ny hetsika maimaim-poana (fifandraisana sy taratasy) ho an'ny aphasia
Ny fitaovanay ho an'ny aphasia
Ireo fampiharana rehetra dia azo ampiasaina amin'ny Internet maimaim-poana. Raha te hampiasa an-tranonkala-tranonkala na any ivelany amin'ny pcizinao sy hanohanana ny asantsika dia azo atao misintona aphasia KIT. Ity fanangonana ity dia misy fampiharana-tranonkala 5 (Soraty ny teny, ny fahazoana leksika, ny fanonona ny vaninteny, ny fanekena ny vaninteny ary ny latabatra ny vanin-teny) hampiasaina amin'ny solosaina PC sy ny pejy misy karatra mihoatra ny arivo miaraka amina hetsika hanaovana pirinty, latabatra fifandraisana ary fitaovana samihafa.
Namorona hetsika roa lehibe amin'ny fiteny PDF mizara faritra ihany koa izahay:
Fananganana fehezanteny: karatra 35
Lexicon sy semantika: karatra 150
Syllables and metaphonology: fidirana 160
Ho an'ireo lahatsoratra teôria amin'nyaphasia afaka mitsidika ianao ny archive.
Weidner, K., & Lowman, J. (2020). Telepractice ho an'ny serivisy fitaizam-pitenenana miteny olon-dehibe: famerenana rafitra. Fomba fijerin'ireo vondrona mahaliana manokana ASHA, 5(1), 326-338.
Laver, KE, Adey - Wakeling, Z., Crotty, M., Lannin, NA, George, S., & Sherrington, C. (2020). Serivisy fitantanana telerehabilitation ho an'ny tapaka lalan-dra. Cochrane Database fanaraha-maso Systematic, (1).
Regina Molini-Avejonas, D., Rondon-Melo, S., de La Higuera Amato, CA, & Samelli, AG (2015). Famerenana rafitra ny fampiasana ny fahitalavitra amin'ny resaka siansa amin'ny fitenenana, amin'ny fiteny ary amin'ny fihainoana. Gazetin'ny telemedicine sy telecare, 21(7), 367-376.
aphasia, aphasia sy telerehabilitation, fitsaboana amin'ny kabary sy fanamafisam-peo
Telerehabilitation ho an'ny aretim-pitenenana ho an'ny olon-dehibe2020-09-132020-09-21http://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2017/08/nuovologo_87e9aa904327d53301f73f9191e17e49.pngFiofanana aretin-tsainahttps://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2020/09/la-teleriabilitazione-per-le-patologie-del-linguaggio-negli-adulti.jpg200px200px
Ny fitsaboana ny fahatakarana famakiana amin'ny aphasiaAphasia, Lahatsoratra
Ny korontana semantika amin'ny olon-dehibe: teôria ary fampiharana maimaim-poanaAphasia, Fiteny